Atoorihii jilay filimkii abid ugu caansanaa dunida oo 'walwal dartiis' isbitaal u tagay - BBC News Somali
Atoorihii xiddiga ka ahaa filimkii laga daba dhacay ee la magac baxay Game Of Thrones, Kit Harington ayaa tallaabo u qaaday inuu "tijaabo caafimaad isku sameeyo", waxaana lagu soo warramay inuu soo wajahay walwal xoog leh iyo culeys dhinaca maskaxda ah.
Harington oo dhawaan soo gaba gabeeyay filimka musalsalka ah ee lagu tilmaamay kii ugu xiisaha badnaa ugu caansanaa ee abid soo mara dunida ayaa booqday isbitaal ku yaalla dalka Mareykanka.
Jilaagan - oo filimkaas ku matalay magaca Jon Snow - ayaa dhowr isbuuc kahor lagu billaabay daweynta, sida uu shaaciyay bogga Page Six.
Lahaanshaha sawirka Hbo
Image caption Kit ayaa filimka ku jilayay magaca John Snow
Wareysi dhawaan lala yeeshay Kit ayuu ku sheegay "inuu dareen aad u xooggan kusoo kordhay" markii uu jilay qeybtii ugu dambeysay ee filimka Game of Thrones, kaasoo uu kasoo shaqeynayay siddeed sano oo lasoo dhaafay.
Wuxuu yidhi: "Maalintii ugu dambeysay ee aan filimka duubay, si fiican ayaan dareemayay... ka dib qeybihii ugu dambeeyay ayaan jilay, markaas ka dib ayaan billaabay inaan xoogaa neef tuuro.
"Ka dib waxay ku dhawaaqeen in la gabogabeeyay, aniguna markaas waan ooyay. Waxay ahayd farxad iyo qalbi jab ku saabsan inaan mar dambe sii sameyn doonin filimka".
Barnaamij laga sameeyay filimkaas gabagabadiisa ayaa lagu soo daray muuqaal laga arkayo Kit oo ilmeynaya markii uu ogaaday in lasoo afjaray doorkiisii.
Image caption Kit Harington iyo xaaskiisa Rose Leslie waxay ku kulmeen Game of Thrones